SSL neSeO: ivo vose vane basa here?
Ngatitange nekuyeuka zvimwe zvekutsvaga kwako kwemazuva ano, kusaremekedza zvawaitsvaga, kana kutarisa vadzivisi vako kana kutsvaga zvimwe zvigadzirwa kana mabasa paWebhu. Iwe wakadaro wakashanyira maHTTP neHTTPS-based web pages. Asi mutsaukoi chaiwo pakati pavo, kunyanya kubva mumaonero eSSL ne SEO? Tichifunga nezvekubatana kwavo kune e-yekutengeserana uye yakawanda yebasa rese rekutsvaga, regai tione kuti SSL neSeO yakaita sei chaizvoizvo.
I SSL ne SEO inobatsira here kana muchiita pamwe chete?
Ngatitangei nemamwe maitiro eumhizha uye ona kuti SSL inoshanda sei. Kuva chikamu cheHypertext Transport Protocol Security, inoshandisa kiyi-2048-bit kuchengetedza ruzivo rwevashandi kuburikidza nekuchengetedzwa kwehutano hwekuvimbiswa, kuongorora, uye kuvharidzirwa pakati pe web server uye Internet browser itself. Chengetedzo, SSL kuchengetedza inowanikwa muzvikamu zvitatu:
Kuchengetedza kunoshanda kuti kuve nechokwadi chokuti zviito zvemugadziri wezvino zvisingataurikiki, saka chero ruzivo harungagoni kupambwa nevanopisa
Kutendeseka kwemashoko kunobatsira kudzivirira chero mafaira kubva kuori kana kusagadziriswa kusina kugadziriswa panguva yekuendeswa
Uye ngatitangei kudzokera kumashure - chii chirikubatanidza chaiyo pakati pe SSL ne SEO? Kana kuchengeteka kunotyaira sei iwe webhusaiti yako mu Search Engine Result Pages? Kungofanana nedzimwe nzvimbo dzakanaka dzinounza hutano hwakanaka kune hutsika yako, pamwe chete nemigwagwa uye kutendeuka kwaro pachako. Ndinoreva kuti webhutete rako rekuchengetedzwa kwewebsite rinewo zvakananga paGoogle tsvakurudzo yekutsvaga paunosarudza kukupa iwe nepamusoro. Pasi apa regai tione kuwirirana pakati peS SSL neSeO pane zvitatu zvinotarisirwa - rankings, traffic, uye kutendeuka:
Sezvatotaurwa, nzvimbo yako yepawebsite yakanyanya kunyanya kuenderana nehutete hwe SSL kupfuura kare. Ndichitarisa kumashure kubva muna 2014-2015 apo Google yakabudisa maitiro ekutanga ekutsigira maHTTPS-based web pages, SSL kuchengetedzwa yakashandiswa kuva chiedza chechiedza chekugadzira chigadziro chekupedzisira. Asi nhasi, maererano nehuwandu hwemasvomhu, inenge hafu yeGoogle's organic search results iri kutaura nezveHTTPS-based websites yakachengetedzwa ne SSL certificate. Uyezve, inenge 1 muzana yemhando dzose dzeInternet dziri paInternet dzinofungidzirwa kuva dzakachengeteka. Saka, sei usingashandisi SSL ne SEO kuti uwane mberi kwemakwikwi, kamwechete nekusingaperi?
Kufunga nezvemafambiro emigwagwa, kunyoresa zviri nani kunowanzopa hurukuro huru, nokuti chete vashandisi vari kushanyira webhusaiti yako, vateereri vakawanda uchatora. Uyezve, iyo inowanikwa yehutete yakachengetedza inopa vese vanogona kutenga muchengeti vachishandisa paInternet chiratidzo chekushanda pawebsite yako yekuremekedza nekuvimbika. Vakawanda vevashandi vangangodarika zvese zvisina kuchengetedzwa uye vanongedzera pane tsvakurudzo yekutsvaga vachivatungamirira pamapeji enyu ewebhu, uye vachipa kukurudzira kuCTR yako yewebsite.
Pashure pezvose, SSL neSeO zvinogona kushanda pamwe chete kuti zviitike pakushandura kwako zvakanyanya. Ndinoreva kuti vakawanda vanogona kutenga vatengi vachashandurwa kuva vechokwadi, kamwechete pavakashanyira nzvimbo yako yakachengetedzwa yakachengetedzwa nemasimba ekuvimba. Ingoyeuka kuti maererano nehukuru hunotsvakurudza, vanhu vanopfuura makumi mapfumbamwe kubva muzana vevateresi vasina kukwanisa vangaramba kuzvipira kwavo kutenga, kungoona kuti yavo yakakwana yakazara yedhaini inouya kuburikidza nehutano husina kuchengeteka Source .